Ukucima ubushushu, eyona iziselo zisempilweni | Amadoda aQinisekileyo
Iziselo ezinempilo ngokufika kobushushu
UPaco Maria Garcia | | Ukutya
Ubusika budlulile kwaye buphelisa isidingo sokunxiba idyasi kwaye usele itshokholethi eshushu. Ngoku kushushu kwaye yintoni Umzimba wethu ufuna ukugcina upholile kwiziphumo zelanga.
Nangona kunjalo, oku akuthethi ukuba kufuneka sigcwalise imizimba yethu ngesoda kunye nezinye iziselo ezisekwe kuyo iikhemikhali kunye nedayi, eya kuthi yenze umonakalo emzimbeni wakho nakwimizobo.
1 Iingcamango zokusela eziphilileyo ukujongana nehlobo elishushu
1.1 Iti ebandayo enelamuni
1.2 Iziqhamo slushies, iziselo ezinempilo
1.3 Ijusi yevatala
Iingcamango zokusela eziphilileyo ukujongana nehlobo elishushu
Iti ebandayo enelamuni
Iti eshushu iyayekelela imithambo-luvo kwaye inokunceda nasekutyeni; Ukongeza, inefuthe elihle lokupholisa. Kolu dibaniso lwangoku ukuze lusebenze, kufanelekile kubanda kakhulu, kuhamba neetyhubhu zomkhenkce ezintathu kunye namathontsi ambalwa emon.
Iziqhamo slushies, iziselo ezinempilo
Yale sifuna kuphela isicatshulwa sesinye isiqhamo sendalo esimnandi. Sidibanisa le ncindi yomkhenkce kunye nokudibanisa ngokuthe ngqo kwi-blender. Isiphumo kukungcamla okumangalisayo okuxutywe nengqele yamanzi afriziwe, kunye nefuthe lokupholisa elihle.
Esi siqhamo phantse amanzi ngokupheleleyo, kananjalo unokugcina ukubanda ngendlela engenakuthelekiswa nanto. Esinye seziselo ezinkulu ezinempilo ngeli xesha. Sisika iigriyidi, sisuse iqokobhe kwaye sibeke kwi-blender. Ngaphambi kokwenza konke oku kufuneka susa yonke imbewu.
Isiselo sehlobo lonke elilungileyo! Akukho luhlaziyo lungcono lokujongana nobushushu behlobo. Ilamuni iyahlaziya ngeempawu zayo zeasidi, kodwa iphilile kakhulu emzimbeni. Le citrus iyanceda ekucoleni ukutya, ibonelela Vitamin C kwaye ivumela ukulwa nelitye lezintso.
Ndingathanda ipere yezinto zokukhafula kwiishethi sesinye seziqhamo esinokuhlaziya kwaye sinike izibonelelo ezinkulu. Ukuze sishukunyiswe, isiselo kufuneka sibe ne-sitrobheli kunye nomkhenkce ongaphezulu kunamanzi, kushiye u-a Izinto ezinobuninzi. Ngokubanzi, i-strawberry iyakunceda ukuba ingagugi kwaye ibonelela ngothotho lweevithamini ezomeleza ngokwenene.
Njengoko sibona, ikho ezininzi iindlela zokusela ezinempilo, ukubuyisela iziselo ezinxilisayo kunye neziselo ezinxilisayo. Ngezi ziselo ungagcina umzobo wakho, uzondle ngokufanelekileyo kwaye uziqhelanise nokunyuka kwamaqondo obushushu.
Imithombo yemifanekiso: El Diario de Hoy / Youtube
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Kufanelekile » Ukutya » Iziselo ezinempilo ngokufika kobushushu
Ngaba iiholide zimanyanisa okanye zahlula izibini?